Xisaab-xidhkii munaasabadda 18 May ee UK 11/06/2013 War-saxaafadeed | Salaan Media
Xisaab-xidhkii munaasabadda 18 May ee UK 11/06/2013 War-saxaafadeed
Xadiis baa ina faraya “ama wax khayr le sheeg ama iska aamus”
London 12/6/2013) SM-Waxa (10/06/2013) ka dhacay galbeedka London ee xarunta Nadi Park Royal kulan ay yeesheen guddidii soo qabanqaabisey xuskii balaadhnaa ee 18 May ee lagu qabtay garoonka kubadda cagta ee Barnet football club. Ujeeddada kulanku waxay ahayd in laga hadlo sida ugu quruxda badan ee loo gaadhsiin lahaa agoomaha iyo darbi-jiifka reer Somaliland kharashkii munaasabadda ka soo baxay sidii qorshuhu ahaa.
Waxa kale oo ay guddidu ka wada hadashay been abuurka iyo tuhunka qaldan ee lagu baahiyey saxaafadda internet-ka qaarkeed taas oo lagu aflagaadeeyey xubno ka tirsan guddida qabanqaabada.
Waxaanu halkan ku caddeynaynaa in lacagtii ka soo baxday munaasabadda marka laga gooyey kharashkii ku baxay xuska gacan ammaana ku jirto oo la hayo, dhakhsana loo gaadhsiin doono agoomaha iyo derbi jiifka Somaliland. Kirada garoonka oo kaliya waxay ahayd £9,000 iyo £1,000 oo deebaaji ah oo maamulka garoonkuna u qaatay qalab garoonka laga jabiyey. Intaa waxa dheer khrashkii kalee ku baxay munaasabadda. Sidaa darteed tuhunka iyo been abuurka laga sameeyey guddida qabanqaabada siiba Safiir Cali Adan Cawaale iyo Guddoomiyaha SSUK -Cabdala Saalim oo kala ah Guddoomiyaha iyo Xoghayaha guddida qabanqaabaduna yahay been cad oo aan sal iyo raad lahayn.
Waxa 23/5/2013 guddiga oo dhallin iyo waayeel isu dhammi u fadhiisteen kulan lagu lagu lafa guray kharashkii ku baxay munaasabadda iyo wix kharash soo hadhay. Waxa dhammaan laysla qaatay xisaabta ah in lacagta guud ee ka soo baxay munaasabaddii 18 May ee London UK tahay lacag dhan £21,335 oo ku sar go’an tigidhadii la iibiyey. Waxay kiradii iyo kharashkii kale ee ku baxay munaasabaddu noqdeen £13,616. Lacagta inta soo hadhay oo ah £7,739 ayaa si wada jir ah laysula qaatay in la gaadhsiiyo sidii hore loo qorsheeyey agoomaha iyo darbi-jiifka Somaliland. Lacagtan soo baxday dhammaanteed waxay guddigu go’aamisay in sida ugu dhkhsaha badan guddidu u qabato munaasad lagu soo casumi doono warbaahinta Somaliland si iyadoo tifatiran looguna wareejiyo dhalinyarada guddida ka tirsan ee u xilsaarnaa inay gaadhsiiso agoomaha iyo derbi jiifka Somaliland.
Dhallinta warbaahinta cabashada soo galiyey (video) guddigay kamid ahaayeen, xisaab xidhka way fadhiyeen waana lagu wada qancay, waxa laysla gartay in Isiniintii bisha May ahayd 27 munaasabad lacagta iyaga lagu wareejinayo la qabto oo si daahir yaa shamis ah oo warbaahintu joogto loogu wareejiyo, balse shirkii may iman oo way kaga baxeen guddidii oo lacagtii sidda.
Mar kale ayaa Axaddii 2/06/2013 fursad la siiyey kadib markay soo hadleen iyagoo yidhi waanu oggollahay inaanu madal warbaahintu joogto kula wareegno , markay meeshii yimaaddeen ee lacagtii loola diyaar yahay bay haddana yidhaadeen ma oggolin in saxaafad la keeno, mana saxeexayno rasiidhka lacagta lagu bixinayo, hana naloo dhiibo lacagta. Arrintaasi way u cuntami weyday guddida oo ku adkaystay inay sharafta guddidu ku jirto in madal markhaati leh lagu wareejiyo lacagta.
Guddigu waxay garan la’dahay sababta ay dhalliyaradu u diiddan yihiin inay madal markhaati leh oo warbaahintu joogto kula wareegaan lacagta saxeexaana heshiiska ay lacagta kula wareegayaan.
Guddigu waxay taariikhdan (10/6/2013) go’aamisay in sida ugu dhakhsaha badan lacagta loo gaadhsiiyo dadkii markii horeba loogu talo galay balse loo dhiibo cid ahlu khayr ah oo madal ay warbaahin iyo waayeelba wada joogo loogu dhiibo.
Ummad Muslim ah ayeyny nahay dadka xumaanta wareejinaya waxaanu leenahay muddo dheer baanu hawshan mutadawacnimo ku soo wadnay, ilaahay ka baqa. Guddigu ma gaydo been abuurka intan leeg ee laga samaynayo.
Codsi saxaafadda iyo dadka Somaliland
Waxanu ka codsanaynaa warbaahinta iyo dadweynaha Somaliland in ay iska hubsadaan oo aanay baahin wararka been abuurka ah ee dadka kala fogaynaya, midnimada reer Somalilandna dhaawacaya. Guddida qabanqaabada 18 May waa guddi tadawuc ummaddooda ugu shaqaynayey oo wakhtigoogii iyo lacagtoodiiba galiyey sidii ay xus wanaagsan oo aynu ugu dabbaaldagno 22 guurada Somaliland reer UK ugu dhici lahaa. Alxamddu lillaah xus wanaagsan oo wacan baa inoo qabsoomay. Alla ha loo mahad naqo iyo intii sida sharafta leh uga qayb qaatay.
Guul iyo gobannimo ayaanu u rajaynaynaa ummadda Somaliland meel walboy joogaan.
Guddidii qabanqaabada 18 May ee UK